maimaimpoana ny ivontoeram-pirenena fanangonan-dra ( CNTS) etsy amin’ny HJRA Ampefiloha izy ireo ka 200 lahy no hisantatra izany anio talata. Tanjon’izy ireo ny hanampiana ny tahirin-dra eo anivon’ity ivontoerana iray ity hanampiana ireo marary mila fandidiana maika sy ireo vehivavy saro-piterahana eto amintsika. Neken’ny minisitry ny fiarovam-pirenena avy hatrany ny fangatahan’izy ireo hanome ra sady nomarihiny manokana fa mbola tena madio ny ran’ireo mpianatra nivoaka avy any amin’ny toerana nianarany ka tsy misy atahorana. Tsiahivina moa fa mbola hiasa eto Antananarivo izy 1.098 lahy ireto mandrapahavita ny fiarovana ny fandriampahalemana mandritra ny fandalovan’ny papa François eto amintsika. “Fenitra” no anarana nisaloran’izy ireo, izay manana tanjona hanao asa manara-penitra ihany koa.